Kor u qaadidda adeegga caafimaadka Hooyada iyo dhallaanka oo laga hadlay “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kor u qaadidda adeegga caafimaadka Hooyada iyo dhallaanka oo laga hadlay “SAWIRRO”
Kulan balaraan oo laga hadlayey olalaha kor u qaadista adeegga caafimaadka hooyada iyo dhallaanka kuna aadan yareynta dhibaatooyinka la xiriirta dayeel la’aanta caafimaadka ee soo wajahda hooyada iyo dhallaanka ay soo qaban qaabisay safiir sharafeedka barnaamijka kor u qaadista adeegga caafimaadka Dr Maryan Qaasim Axmed ayaa lagu qabtay Muqdisho.
Kulankan ayaa waxaa ka qeyb galay Wasiirkii hore hidaha iyo tacliiinta sare, mas’uuliyinka ka socotay Wasaaradda caafimaadka uu ka mid yahay isku duwaha caafimaadka gobolka Banaadir, ururka haweenka Qaranka, Uruka haweenka gobolka Banaadir, ururdda bulshadda raydka haweenka iyo mas’uuliyiin kale.
Drs Maryan Qaasim oo furtay kulanka ayaa sheegtay in loo baahanyahay in loo istaago sidii wax loogu qaban lahaa hooyada iyo dhallaanka, isla markaana looga hortagi lahaa dhibaatooyinka soo gaarta xilliga dhalmada.
Guddoomiyaha Ururka Haweenka ee gobolka baneaaadir Jawaahir Baarqab oo ka hadashay kulanka ayaa sheegtay in ay dhiirigelineyso barnaamijyada nuucaani oo kale ah, si daryeel caafimaad ay u helaan hooyada iyo dhallaanka.
Sidoo kale Guddoomiyaha Ururka Haweenka Qaranka Batuula Sheekh Axmed Gabale oo ka hadashay kulanka la xiriira olalaha kor u qaadista adeegga caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ayaa xustay in dayaacadda hooyada ay ka soo bilabato qoyska, loona baahanyahay in wacyi gelin loo sameeyo Qoysaska, waxaana ay Wasaaradda Caafimaadka ka codsaday in la horumariyo adeegyada caafimaadka bulshada.
Wasiirkii hore ee Wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ahna aas aasihii barnaamijka Carma ee la xiirara olaha kor u qaadista daryeelka adeegga caafimaadka hooyada iyo dhallaanka Ducaale Aadan Maxamed ayaa xusay in ku guulaysiga adeegda daryeelka caafimaadka hooyada iyo dhallaanka uu la xirriiro hoos u dhigidda qatar caafimaad ee hooyada soo wajahda xilliga dhalmada.
Wasiirka Gaashaandhigga oo maanta gaaray Dhuusa Mareeb iyo Guriceel